कामिनीका कारण टेलिकमलाई २० अर्ब घाटा, किन चुप छ अख्तियार ? | My News Nepal
कामिनीका कारण टेलिकमलाई २० अर्ब घाटा, किन चुप छ अख्तियार ?
२०७५ साउन १० गते
काठमाडौं । नेपाल टेलिकममा विवाद नै विवादमा फसेकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीका कारण टेलिकमले २० अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नु पर्ने भएको छ । टेलिकमभित्र एप्स बनाउने देखि फोरजी सेवा विस्तार गर्दा करोडौं भ्रष्टाचारमा मुछिएकी भण्डारीलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले हटाउन खोजेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिक रहेकी अञ्जान शाक्यले सेटिङ मिलाई भण्डारीको पद थमौती गराएकी थिइन् । शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा उच्च तहमा रहेकी शान्तिलक्ष्मी शाक्यकी बहिनी हुन् ।
भण्डारीले कमिसनमा कुरा नमिलेपछि चिनियाँ कम्पनी हुवावेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा टेलिकमलाई २० अर्ब रुपैयाँ घाटा हुन पुगेको स्रोत बताउँछ । नेपाल टेलिकमको तीब्र गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा फोरजी सेवाको विस्तार काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा सुरु भएको डेढ वर्ष वितिसक्दा पनि अन्य ठाउँमा भने विस्तार हुन सकेको छैन । टेलिकमले भैरहवा, विराटनगरसहितका स्थानमा सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको बर्षो भइसक्दा पनि भण्डारीकै कमिसनमोहका कारण सेवा विस्तार हुन नसकेको हो ।
अर्कोतर्फ भण्डारीलाई एनसेलले मासिक रुपमा कमिसन बुझाउँदै आएको हुँदा पनि उनले फोरजी सेवा विस्तारको काममा ढिलाई गरेको टेलिकम स्रोत बताउँछ । टेलिकमलाई हुवावे र जेटीईले भएकै प्रविधिलाई अपग्रेड गर्ने र करिब ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँमै सन् २०२३ सम्मको लागि फोरजी सेवा दिन सक्ने प्रस्ताव सन् २०१७ मै गरेको थियो । यो प्रस्ताव टेलिकमले मानेन र सबै नयाँ प्रविधि र प्रक्रियाबाट जाने भन्दै नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको थियो । जसका कारण अहिलेसम्म पनि काम शुरु हुन सकेको छैन ।
चिनियाँ कम्पनीको सो प्रस्ताव नमानेकै कारण टेलिकमले समयमा नै फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको अहिले आएर पुष्टि भइसकेको छ । टेलिकमले हाल प्रस्ताव माग गरेर फोरजी विस्तार गर्न आवदेन दिने कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
प्रस्ताव मूल्यांकन अन्तिम चरणमा रहेको बताइएपनि भण्डारीले पहिले झैं उजुरी हाल्न लगाई काम नै अवरोध गर्न सक्ने सम्भावना छ । फोरजी सेवा विस्तारका नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्दा समेत भण्डारीलाई अख्तियारले कुनै पनि कारबाही नगरेका कारण भण्डारीले नै उजुरी हालेर कामलाई अल्झाउन खोजेकी हुन् ।
देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्न कम्तिमा २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । २ वर्ष अगाडिकै चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव नमान्दा टेलिकमले गर्ने एउटै काम र करिब उस्तै समयसम्मको लागि २० अर्ब भन्दा बढी लागत लाग्ने देखिन्छ । यो सबै भण्डारीको कमजोरी र भ्रष्टमोहका कारण भएको हो ।
टेलिकमले सेवा सुरु गर्दा एनसेल कम्पनी खरिद बिक्री भएर ६५ अर्ब रुपैयाँको पूँजीगत लाभकर विवादमा फसेको थियो । यही विवादका कारण टेलिकमले सेवा सुरु गरेको ६ महिनापछि मात्रै एनसेलले फोरजी सुरु गरेको हो । एनसेलले राज्यलाई ६५ अर्ब राजश्व नतिर्दा समेत राज्यका सबै निकायहरुलाई पंगु बनाई देशभरी फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेको छ । तर, टेलिकमले भने काठमाडौं र पोखराबाहेक कहिं पनि सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन ।
फोरजीमा २०७४ को कात्तिक दोस्रो साताबाट स्मार्ट टेलिकमको फोरजी सेवा सुरु भइसकेको छ । यो कम्पनीका जम्मा ३३ हजार मात्रै प्रयोगकर्ता छन् । टेलिकमले सेवा विस्तार गर्न सकेको र प्रतिस्पर्धी बजारम आक्रामक गति बढाउन सकेको अवस्थामा यसले बलियो बजार हिस्सा बनाउन सक्ने हुँदाहँुदै पनि टेलिकम अझै सुस्त गतिमै रहेको छ ।
संसदको विकास समितिले पनि टेलिकमलाई यथाशिघ्र फोरजी सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो भने दूर सञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले पनि सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो । टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक भण्डारीले मागेकै सयम अनुसार विकास समितिले निर्देशन दिएको भएपनि अझै टेलिकम फोरजी सेवा विस्तारमा लागेको छैन । सरकारले चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै पटक–पटक भण्डारीलाई स्पष्टिकरण सोधेपछि शाक्यले उनलाई जोगाउँदा टेलिकमको फोरजी सेवा नै लामो समय अवरुद्ध हुने देखिएको छ ।
(यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिक)
तालिमप्राप्त कुकुरसहित एसएसपी र सिआईबीको टोली पाँचथरतर्फ
पाँचथर हत्या काण्ड : ज्वाँइ ससुराको बंश नाश गरेर के चाहन्थ्यो हत्यारा ?